လေသံစစ်စစ်နဲ့ စကားပြောခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on August 21, 2014 at 13:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘာသာစကားတစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်အောင် ပြောဆိုနိုင်တဲ့အပြင် အဲဒီဘာသာစကားပြောတဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ လေသံစစ်စစ်နဲ့ ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ တောက်ပြောင်နေတဲ့ ရွှေပေါ် မြ ဆင့်လိုက်သလိုပါဘဲ။ လေသံဆို အမျိုးမျိုးရှိလေရဲ့။ အမေရိကန် လေသံလို အသံလိပ်လိပ်နဲ့ အိုင်ရစ်(ရှ်) လေသံလို တေးသွားသံတွေလိုမျိုး သိသိသာသာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ လေသံတွေ ရှိသလို တစ်ချို့လေသံတွေဟာ တော်တော်ကျွမ်းကျင်စွာ နားထောင် ကျက်မှတ်မိထားမှ ခွဲခြားပြောနိုင်လောက်အောင် သိမ်မွေ့လွန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာသူများအတွက်ကတော့ ကမ္ဘာ အရပ်ဒေသအသီးသီးက လူမျိုးအသီးသီးတို့ရဲ့ လေသံတွေရဲ့ သာမန်ကွဲပြားမှုတွေကိုတော့ သတိထားမိမှာပါ။ ဒီလိုလေသံတွေကို တူအောင်လိုက်ပြောဖို့ လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် အချိန်တော်တော်ပေးရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အကျိုးတော့ မယုတ်ပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်စကားပဲ ဖြစ်ကြတဲ့ အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိသျှ လေသံတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ သူတို့ စကားပြော အသံထွက်တွေက မတူညီတဲ့ ပါးစပ်ရဲ့ နေရာအသီးသီးကို အသုံးပြုပြီး ထွက်လာတဲ့ အသံတွေပါ။ ဗြိတိသျှတွေက ပါးစပ်ဖျားနဲ့ လျှာဖျားတွေကို သုံးကြပြီး အမေရိကန်တွေကတော့ ပါးစပ်အတွင်းပိုင်း အာခေါင်နေရာကနေ အသံကို တွန်းထုတ်ကာ နှာသံကိုလည်း အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်လေသံက အသံပိုမာတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ လေသံတစ်ခုချင်းစီက သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ဟန်ပါတဲ့ အသံထွက်စနစ် တစ်ခုစီဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလေသံနှစ်ခုရဲ့ ခွဲပြားချက်တွေကို သရအသံထွက် (vowels) တွေမှာ ကောင်းကောင်းတွေ့ရ (ကြားရ) ပါတယ်။ Londoners တွေရဲ့ Cockney လေသံဖမ်းချင်ရင် "i" အသံထွက်တွေမှာ ပါးစပ်ကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ဟပြီး ပြောကြည့်ရင် Londoner တစ်ယောက်အသံနဲ့ ပိုတူအောင် ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလောက်လေးနဲ့ တစ်ခါတည်းတူအောင် ပြောနိုင်ပြီလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ လုံးဝနီးပါးတူအောင် ပြောနိုင်ဖို့ native speaker တွေရဲ့ လေသံတွေကို အများကြီးနားထောင်ပြီး အဲဒီထဲကမှ အသေးစိတ်အချက်တော်တော်များများကို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်မှသာ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
Native speaker တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေသံတွေကို ထွက်တဲ့အခါ ပါးစပ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုး၊ မျက်နှာပေါ်ရှိ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးချပါတယ်။ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေ စကားပြောပုံကို ကြားမိ သတိထားမိမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ အနုအရွ ရိုမန်းတစ်ဆန်ပုံ (ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ ကြီးကျယ်မောက်မာမှု) တွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ သူတို့ရဲ့ သိသာလွန်းလှတဲ့ နှာသံကို ပြောတာ။ (တစ်ချို့ဆို ပြင်သစ်တွေက စကားကို ပါးစပ်နှင့် မပြောဘဲ နှာခေါင်းနှင့် ပြောတယ်လို့တောင် ဆိုကြတာ။)
ရယ်စရာ ပြောတာဆိုပေမဲ့ ဒီအချက်က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မှန်ပါတယ်။ ပြင်သစ်သံနဲ့ ပြင်သစ်စကား ကောင်းကောင်းပြောတတ်ချင်ရင် အသံတစ်ချို့ကို နှာခေါင်းထဲကနေ မှုတ်ထုတ်နိုင်အောင် သေသေချာချာအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ထားမှ ရမှာပါ။
ဒီလိုထူးခြားတဲ့ လေသံတွေကို ပြင်သစ်စကားတစ်ခုတည်းမှာပဲ တွေ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အချို့ဘာသာစကားတွေမှာ အသံထွက်တွေကို ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လည်ချောင်း၊ အသံအိုး စတဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်ရပါတယ်။
ဘာသာစကား တစ်ချို့ရဲ့ လေသံတွေဆို ထွက်ရခက်လွန်းလို့၊ ဘာကြောင့်ဆို အဲဒီအသံတွေ ထွက်ဖို့သုံးရတဲ့ မျက်နှာပြင်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု အားနည်းချက်တွေကြောင့် (သင့်ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကား အသံထွက်မှာ မသုံးရတဲ့ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်) ဘယ်လိုမှ စကားပီအောင် ပြောမထွက်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေသေချာချာ မျက်နှာကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကို လေ့ကျင့်တာ၊ အသက်ရူသွင်း ရူထုတ်ပုံတွေကို လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ native speaker တွေလို ပီအောင်ပြောနိုင်လာမှာပါ။
တစ်ခါတစ်လေ အသံတစ်ခုကို တုပြီး ပြောထွက်ဖို့တောင် ခက်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသံထွက်ဖို့ native speaker က ပါးစပ်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုတောင် နားလည်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒါတွေကို ကျော်လွှားဖို့ "accent reverse engineering" ဆိုတဲ့ အလွန်အသုံးတည့်လှတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုကို ရှာတွေ့ထားပါတယ်။
ပထမဆုံး ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားကို တစ်ခြားသော native speaker တစ်ယောက်က ဘယ်လိုအသံထွက်သလဲ လေ့လာပါ။ သီးခြားလေသံ စကားဝဲပုံတွေကို မှတ်သားပါ။ အဲဒီအခါ ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ သူစကားပြောတဲ့အခါ ဘယ်အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဘယ်အသံထွက်တွေအတွက် သုံးသလဲ၊ ဥပမာ ပါးစပ်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အသုံးအများဆုံးလဲ။ လျှာကို ဘယ်လိုထားရသလဲ။ အသက်ဘယ်လိုရူပြီး လေကို ပါးစပ်ထဲမှာ ဘယ်လို အသွင်း အထုတ်လုပ်သလဲ စသည်ဖြင့် လေ့လာပါ။
ဥပမာ ဂျာမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ကို ဂျာမန်စကားကို ဂျာမန်လေသံနဲ့ ပြောချင်ရင် သူတို့ (ဂျာမန်တွေ) အင်္ဂလိပ်လို ပြောတာကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လေသံတွေဟာ လေမှုတ်သံပြင်းပြင်းနဲ့ အသံတွေဖြစ်ပြီး "s" အသံနဲ့ "z" အသံတွေ အားလုံးရောထွေးနေမယ်။ တစ်ချို့ ဟာသရုပ်မြင်သံကြား/ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ ဂျာမန်တို့ ဩစတြေးလျ ပုံစံတို့ သရုပ်ဆောင်ရင် လျှာကို ရှေ့ကိုထုတ်ပြီး ရှေ့သွားအတွင်းဘက်ကို လျှာနဲ့ ထိုးထိုးပြီး လုပ်ပြောတာတွေ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ တကယ်တန်းတုပြီး ပြောတော့မယ်ဆိုရင် နားဝင်သက်သာအောင် လက်ခံနိုင်အောင် ပြောသင့်ပါတယ်။ ရွဲ့ပြောသလိုမျိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
Omniglot.com မှ Owen Lee ၏ Secrets of Speaking withaGenuine Accent ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကားတဈခုကို ကြှမျးကငျြအောငျ ပွောဆိုနိုငျတဲ့အပွငျ အဲဒီဘာသာစကားပွောတဲ့ လူမြိုးတှရေဲ့ လသေံစဈစဈနဲ့ ပွောနိုငျတယျဆိုရငျတော့ တောကျပွောငျနတေဲ့ ရှပေျေါ မွ ဆငျ့လိုကျသလိုပါဘဲ။ လသေံဆို အမြိုးမြိုးရှိလရေဲ့။ အမရေိကနျ လသေံလို အသံလိပျလိပျနဲ့ အိုငျရဈ(ရျှ) လသေံလို တေးသှားသံတှလေိုမြိုး သိသိသာသာခှဲခွားသိနိုငျတဲ့ လသေံတှေ ရှိသလို တဈခြို့လသေံတှဟော တျောတျောကြှမျးကငျြစှာ နားထောငျ ကကျြမှတျမိထားမှ ခှဲခွားပွောနိုငျလောကျအောငျ သိမျမှလှေ့နျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လလေ့ာသူမြားအတှကျကတော့ ကမ်ဘာ အရပျဒသေအသီးသီးက လူမြိုးအသီးသီးတို့ရဲ့ လသေံတှရေဲ့ သာမနျကှဲပွားမှုတှကေိုတော့ သတိထားမိမှာပါ။ ဒီလိုလသေံတှကေို တူအောငျလိုကျပွောဖို့ လကေ့ငျြ့မယျဆိုရငျ အခြိနျတျောတျောပေးရပါမယျ။ ဒါပမေဲ့ အကြိုးတော့ မယုတျပါဘူး။
အင်ျဂလိပျစကားပဲ ဖွဈကွတဲ့ အမရေိကနျနှငျ့ ဗွိတိသြှ လသေံတှကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရအောငျ။ သူတို့ စကားပွော အသံထှကျတှကေ မတူညီတဲ့ ပါးစပျရဲ့ နရောအသီးသီးကို အသုံးပွုပွီး ထှကျလာတဲ့ အသံတှပေါ။ ဗွိတိသြှတှကေ ပါးစပျဖြားနဲ့ လြှာဖြားတှကေို သုံးကွပွီး အမရေိကနျတှကေတော့ ပါးစပျအတှငျးပိုငျး အာခေါငျနရောကနေ အသံကို တှနျးထုတျကာ နှာသံကိုလညျး အမြားအားဖွငျ့ အသုံးပွုကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အမရေိကနျ အင်ျဂလိပျလသေံက အသံပိုမာတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ လသေံတဈခုခငျြးစီက သီးသနျ့ကိုယျပိုငျဟနျပါတဲ့ အသံထှကျစနဈ တဈခုစီဖွဈကွပါတယျ။ အဲဒီလသေံနှဈခုရဲ့ ခှဲပွားခကျြတှကေို သရအသံထှကျ (vowels) တှမှော ကောငျးကောငျးတှရေ့ (ကွားရ) ပါတယျ။ Londoners တှရေဲ့ Cockney လသေံဖမျးခငျြရငျ "i" အသံထှကျတှမှော ပါးစပျကို ခပျကယျြကယျြဟပွီး ပွောကွညျ့ရငျ Londoner တဈယောကျအသံနဲ့ ပိုတူအောငျ ပွောနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလောကျလေးနဲ့ တဈခါတညျးတူအောငျ ပွောနိုငျပွီလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ လုံးဝနီးပါးတူအောငျ ပွောနိုငျဖို့ native speaker တှရေဲ့ လသေံတှကေို အမြားကွီးနားထောငျပွီး အဲဒီထဲကမှ အသေးစိတျအခကျြတျောတျောမြားမြားကို လလေ့ာပွီး လကေ့ငျြ့မှသာ ဖွဈနိုငျမှာပါ။
Native speaker တှဟော သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျလသေံတှကေို ထှကျတဲ့အခါ ပါးစပျရဲ့ အစိတျအပိုငျးအမြိုးမြိုး၊ မကျြနှာပျေါရှိ ကွှကျသားလှုပျရှားမှုအမြိုးမြိုးကို အသုံးခပြါတယျ။ ပွငျသဈလူမြိုးတှေ စကားပွောပုံကို ကွားမိ သတိထားမိမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ အနုအရှ ရိုမနျးတဈဆနျပုံ (ဒါမှမဟုတျ သူတို့ရဲ့ ကွီးကယျြမောကျမာမှု) တှကေို ပွောတာမဟုတျဘူးနျော။ သူတို့ရဲ့ သိသာလှနျးလှတဲ့ နှာသံကို ပွောတာ။ (တဈခြို့ဆို ပွငျသဈတှကေ စကားကို ပါးစပျနှငျ့ မပွောဘဲ နှာခေါငျးနှငျ့ ပွောတယျလို့တောငျ ဆိုကွတာ။)
ရယျစရာ ပွောတာဆိုပမေဲ့ ဒီအခကျြက အတိုငျးအတာတဈခုအထိ မှနျပါတယျ။ ပွငျသဈသံနဲ့ ပွငျသဈစကား ကောငျးကောငျးပွောတတျခငျြရငျ အသံတဈခြို့ကို နှာခေါငျးထဲကနေ မှုတျထုတျနိုငျအောငျ သသေခြောခြာအရငျဆုံးလကေ့ငျြ့ထားမှ ရမှာပါ။
ဒီလိုထူးခွားတဲ့ လသေံတှကေို ပွငျသဈစကားတဈခုတညျးမှာပဲ တှရေ့တာမဟုတျပါဘူး၊ အခြို့ဘာသာစကားတှမှော အသံထှကျတှကေို ပါးစပျ၊ နှုတျခမျး၊ လညျခြောငျး၊ အသံအိုး စတဲ့ နရောအမြိုးမြိုးကို အသုံးပွုပွီး ထုတျရပါတယျ။
ဘာသာစကား တဈခြို့ရဲ့ လသေံတှဆေို ထှကျရခကျလှနျးလို့၊ ဘာကွောငျ့ဆို အဲဒီအသံတှေ ထှကျဖို့သုံးရတဲ့ မကျြနှာပွငျကွှကျသားလှုပျရှားမှု အားနညျးခကျြတှကွေောငျ့ (သငျ့ရဲ့ မိခငျဘာသာစကား အသံထှကျမှာ မသုံးရတဲ့ ကွှကျသားလှုပျရှားမှုတှကွေောငျ့) ဘယျလိုမှ စကားပီအောငျ ပွောမထှကျနိုငျတာတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သသေခြောခြာ မကျြနှာကွှကျသားလှုပျရှားမှုကို လကေ့ငျြ့တာ၊ အသကျရူသှငျး ရူထုတျပုံတှကေို လကေ့ငျြ့မယျဆိုရငျတော့ အဲဒီ native speaker တှလေို ပီအောငျပွောနိုငျလာမှာပါ။
တဈခါတဈလေ အသံတဈခုကို တုပွီး ပွောထှကျဖို့တောငျ ခကျတတျပါတယျ။ ပွီးတော့ အသံထှကျဖို့ native speaker က ပါးစပျရဲ့ ဘယျအစိတျအပိုငျးကို အသုံးပွုတယျဆိုတာကိုတောငျ နားလညျဖို့ မလှယျပါဘူး။ အဲဒါတှကေို ကြျောလှားဖို့ "accent reverse engineering" ဆိုတဲ့ အလှနျအသုံးတညျ့လှတဲ့ နညျးပညာတဈခုကို ရှာတှထေ့ားပါတယျ။
ပထမဆုံး ကိုယျ့မိခငျဘာသာစကားကို တဈခွားသော native speaker တဈယောကျက ဘယျလိုအသံထှကျသလဲ လလေ့ာပါ။ သီးခွားလသေံ စကားဝဲပုံတှကေို မှတျသားပါ။ အဲဒီအခါ ဘာတှတှေရေ့မလဲဆိုတော့ သူစကားပွောတဲ့အခါ ဘယျအဂါင်္အစိတျအပိုငျးတှကေို ဘယျအသံထှကျတှအေတှကျ သုံးသလဲ၊ ဥပမာ ပါးစပျရဲ့ ဘယျအစိတျအပိုငျးတှကေို အသုံးအမြားဆုံးလဲ။ လြှာကို ဘယျလိုထားရသလဲ။ အသကျဘယျလိုရူပွီး လကေို ပါးစပျထဲမှာ ဘယျလို အသှငျး အထုတျလုပျသလဲ စသညျဖွငျ့ လလေ့ာပါ။
ဥပမာ ဂြာမနျလူမြိုးတဈယောကျကို ဂြာမနျစကားကို ဂြာမနျလသေံနဲ့ ပွောခငျြရငျ သူတို့ (ဂြာမနျတှေ) အင်ျဂလိပျလို ပွောတာကို နားထောငျကွညျ့ပါ။ သူတို့ရဲ့ အင်ျဂလိပျလသေံတှဟော လမှေုတျသံပွငျးပွငျးနဲ့ အသံတှဖွေဈပွီး "s" အသံနဲ့ "z" အသံတှေ အားလုံးရောထှေးနမေယျ။ တဈခြို့ ဟာသရုပျမွငျသံကွား/ရုပျရှငျသရုပျဆောငျတှေ ဂြာမနျတို့ ဩစတွေးလြ ပုံစံတို့ သရုပျဆောငျရငျ လြှာကို ရှကေို့ထုတျပွီး ရှသှေ့ားအတှငျးဘကျကို လြှာနဲ့ ထိုးထိုးပွီး လုပျပွောတာတှေ ကွညျ့ဖူးကွမှာပါ။ တကယျတနျးတုပွီး ပွောတော့မယျဆိုရငျ နားဝငျသကျသာအောငျ လကျခံနိုငျအောငျ ပွောသငျ့ပါတယျ။ ရှဲ့ပွောသလိုမြိုးတော့ မဖွဈပါစနေဲ့။
Omniglot.com မှ Owen Lee ၏ Secrets of Speaking withaGenuine Accent ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by aungnaingthu on August 21, 2014 at 16:39
Permalink Reply by Zin Maung Maung Soe on August 23, 2014 at 12:06
Permalink Reply by mayzinthin on August 24, 2014 at 19:42
Permalink Reply by Khin Swe Oo on August 31, 2014 at 11:03
Permalink Reply by thuranewin on September 2, 2014 at 14:26
I have been trying to pronounce like native speaker.
So,I now know how I try to pronounce to be UK and USA pronunciation.
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 15, 2015 at 19:01
i like is UK oxford university and USA harvard university what is native speaker?